Hello, saaxiibo gacaliyeyaal ah, sheeko astik Jarmal ah oo lagu magacaabo casharkan, gaar ahaan saaxiibada jarmalka barashada ee xiisaha leh, mararka qaarkood way adagtahay in la fahmo, dad badanna way ku adagtahay fahamka Jarmalka Jarmalka Waan ka hadli doonaa.
Casharradeennii ugu horreeyay, waxaan ku sheegnay in xarfaha magacyada guud ee Jarmalka in lagu qoro xarfaha waaweyn iyo in magac jinsi kasta uu leeyahay maqaal.
Casharkeenna loogu magac daray maqaallada Jarmalka, waxaan marka hore ka hadli doonnaa waxa uu maqaal yahay, inta nooc ee maqaallada ah ee Jarmal ku jira, iyo ereyada hor yaalla maqaalladaas. Ugu dambeyntiina, waxaan ku xoojin doonnaa wixii aan ku sharraxnay tusaalooyin waxaanna ku soo gabagabeyn doonnaa imtixaanka maaddada ee maqaallada Jarmalka.
Mawduuca maqaallada Jarmalku waa mowduuc aad muhiim u ah. Waa in si fiican loo barto. Maqaallada Jarmalka Suura gal ma aha inaad si sax ah ugu hadasho una qorto Jarmal adigoon baran inta maqaal ee la heli karo. Gaar ahaan maadooyinka sida magacyada iyo weedho sifooyin article on Waxay kuu fududeyn doontaa shaqadaada inaad hesho macluumaad aad u wanaagsan oo ku saabsan.
Ka dib markaad akhriso muxaadarada maqaallada Jarmalka, waxaan kugula talineynaa inaad ku qaadatid imtixaanka maadooyinka Jarmal jarmalka dhowr su'aalood dhamaadka casharka. Hada aan siino mowduucyadeena oo aan bilowno casharkeena.
QODOBADA KOOXAHA KOOXAHA KOOWAAD
FIIRO GAAR AH: GESCHLECHTSWORT
Maqaalka waxaa badanaa loogu yeeraa mid ka mid ah mawduucyada ugu adag ee bartayaasha luuqada Jarmalka.
Waxaanu mawduucan ku soo gelinaynaa qaybtan, waxaana rajeyneynaa in aad aragto in taasi aysan ahayn arrin aad u adag.
Aynu ogaanno in haddii aad ereyada ereyadooda si wadajir ah u xifdisaan, wax dhibaato ah kuma lahaan doontaan tan. Laakiin weli, waxaan ka sameyn doonnaa koox-kooxeed ballaadhan mowduucan oo aan baari doonnaa noocyada ereyada loo adeegsado qodobkee.
Hadda aan tagno meesha aad ku jirto.
Jarmalka waxaa jira gabaro magacyo galmo ah oo caanahani waxay ka kooban yihiin saddex nooc.
Jarmal ahaan, magacyadu waa lab ama dhadig ama dhexdhexaad. Sidaa darteed, qodobka magaca hortiisa ku yaal wuxuu isu beddelaa jinsiga magaca.
Waxaa jira laba nooc oo maqaal ah oo Jarmal ah, kan hore oo ah maqaallo qeexan kan labaadna waa maqaallo aan la cayimin.
Jarmal ahaan, qodobbada qaarkood waxaa loogu yeeraa, das iyo qodobbada dhinta.
Maqaallada aan dhammaadka lahayn ee Jarmalku waa maqaallo ein iyo eine ah.
Waxa kale oo jira maqaal cayiman iyo fikrad maqaal aan xadidnayn oo Ingiriis ah. Saaxiibada qaata casharada Ingiriisiga ayaa sifiican u fahmi kara maadada. Ingiriisiga, maqaalka waa maqaal qeexan, waxaana jira 2 maqaal oo aan la cayimin, a iyo an. Adeegsiga maqaallo gaar ah iyo maqaallo aan cayimanayn oo Ingiriis ah waxay la mid yihiin tan Jarmalka.
Maqaallo gaar ah iyo maqaalo aan cayimanayn oo Jarmal ah Waxaan sheegnay inay jiraan laba nooc oo maqaal ah, oo kala ah.
Marka hadda wuxuu leeyahay, oo loo yaqaan das iyo maqaalo dhinta Maqaallada gaarka ah ee Jarmalka Aynu macluumaad ka siino:
Jarmal, magacyada dhammaantood waxaa lagu magacaabaa artikel der, das, u dhintaan Mid ka mid ah ereyada ayaa laga helaa. Erayadan malaha wax u dhigma oo Turki ah oo si buuxda looguma turjumi karo afkeenna. Ereyadani waxay la mid yihiin qayb ka mid ah magaca ay ku jiraan. Inta aad baraneyso magac, waxaa lagama maarmaan ah in si wada jir ah loo barto maqaalkiisa sidii inuu yahay hal eray oo magac leh. Waa der das die ereyada waxaa lagu sifeeyay maqaallo gaar ah.
Hadaad kaliya xafideysid ereyga adigoon maqaalka baran, erayga aad baratay waxbadan ma qaban doono. Magacyada Jarmalka, kelinimada, badnaanta, jumladaha sifooyinka iyo wixii la mid ah. Muhiimadda maqaallada ayaa si fiican loo fahmi doonaa. UNICEF meelaha qaarkood "definely"Iyo qaar ka mid ah"qeexiddaWaxay u gudubtaa sidii ”. Intaas waxaa sii dheer, maqaallada waxaa loo soo gaabiyay qaamuusyo badan iyo ilo sida hoos ka muuqata. Fadlan maskaxda ku hay xarfaha soo gaabinta ee la muujiyay.
Jarmal ahaan, qodobka magacyada jinsiga ee jinsi ahaan lab yahay "der".
Jarmal ahaan, qodobka "dhinta" waa qodobka magacyada magacyada jinsiga ee jinsi ahaan dheddig.
Qodobka magacyada lamaanaha jinsiga ee Jarmalku waa "das".
Si kastaba ha noqotee, markaan dhahno jinsiga magaca, aan fiiro gaar ah u yeelanno waxyaabaha soo socda: Way adag tahay in la ogaado jinsiga magacyada af Jarmal, lama saadaalin karo jinsiga magaca macnaha magacaas. Tani waxay ku saabsan tahay naxwaha iyo qaab dhismeedka ereyga. Sidaa darteed, markaad baraneyso eray cusub, waa maxay jinsiga ereygaas iyo maqaalka Waxaad ka baran kartaa waxa ay tahay kaliya qaamuusyada. In kasta oo ay jiraan habab qaar oo lagu saadaaliyo waxa eray jinsi iyo maqaal ku noqon karo Jarmal, haddana weli waa kan ugu saxsan. Qaamuuska Jarmalka si loo eego oo wax loo barto.
Tusaalooyinka maqaallada Jarmalka:
dhinto katze : cat
der Baum : Geed
dhiman Blume : Ubax
Das Auto : baabuur
Tusaalooyinka Sawirka ah ee Adeegsiga Artikel Jarmal
Sawirka soo socda waxaa jira erey ku saabsan isticmaalka isticmaalka Jarmalka.
Sida sawirka sawirka loo arko, waxaa jira daroogo jilicsan oo horay u ah magacyada ragga, rikoodhka dhimashada ayaa hor taagan magaca magacyada dheddigga, iyo das artik waxaa ku yaal magaca hore ee dhexdhexaad ah.
Jarmal waa xiriirka u dhexeeya jinsiga ee macnaha erayo lahayn, sidaas garabaka jinsiga rag ah ee magac yihiin rag ah sida in English, erayga jeesasho jinsiga haweenka ma aha kiiska sida isagoo jinsiga haweenka.
Jinsiga magacyada Jarmal waxaa lagu baran karaa oo keliya iyadoo laga xafido qaamuuska. Hiddaha magacyada qaybaha qaarkood waa la isku ururiyaa. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato jinsiga magacyada af Jarmal Magacyada Jarmalka Mawduuca Mawduuca Waxaad dib u eegi kartaa goobtaada.
Matalaada Maqaallada Jarmalka ee Qaamuusyada
Jarmalka Jarmal Qaamuusyada, sidaan kor ku soo qornay hadda, "der Tisch, die Katze" iyo wixii la mid ah. kuma dhacaan foomka. Erayada looma wada qoro qodobadooda qaamuusyada Jarmalka. Kaliya calaamadee yar erayga agtiisa iyo maqaalka waa la sheegay waxa dhacay. Qodobbada waxaa loo soo gaabiyaa ilaha ugu badan sida soo socota:
ka UNICEF m veya r jilayaasha.
ka UNICEF f veya e jilayaasha.
ka UNICEF n veya s jilayaasha.
Ereyga "m" ama "r"
Ereygan ayaa la xayiray waraaqaha f ama e waxay noqon doonaan "dhinta"
Waxaa loola jeedaa in "das" ay la socoto kelmaddaha ay ku qoran yihiin warqadda n ama s.
Dhoobo ka Qaamuusyada Jarmalka, yar r warqaddii waa la dhigay
Dhoobo ka Qaamuusyada Jarmalka, yar e warqaddii waa la dhigay
Dhoobo ka Qaamuusyada Jarmalka, yar s warqaddii waa la dhigay
Waraaqahaas sidoo kaler die das waa xarfaha ugu dambeeya ee maqaalkooda.
Dhoobo ka waxaa jira wax yar r qor warqadda, ka oo ku xigta bararka e qor warqadda, ka Ciise s Warqadda ayaa la dhigaa. Waraaqahaas sidoo kaler-due-ins waa xarfaha ugu dambeeya ee maqaalkooda. Tusaale ahaan, haddii aad aragto xaraf r oo ku xiga erayga markaad eegto qaamuus, macnaheedu waa in maqaalka aad eegaysaa uu ku jiro der, si la mid ah, haddii e e ku xigto erayga, waxay ka dhigan tahay in eraygu la dhinto maqaalka, haddii uu jiro s, maqaalka waa das. Qaamuusyada qaarkood MFN waraaqaha, waraaqaha waxaan maskulin, waxaan Femininum, Neutrum (Galmada jinsiga dhexdhexaad ah Lab cins- dumar) waa xarfaha ee erayada. M warqad loogu talagalay artikelini, Waraaqda F waxay u dhimanaysaa artikelini, N waa dusha artikelini .
Guud ahaan, ilaha iyo qaamuusyada ayaa dooranaya mid ka mid ah labada adeegyadan,m - f - n"Ama"r - s - e"Warqadaha.
Jarmalka qaar ka mid ah Artikeller iyo Artikeller oo aan la aqoonsan
Saaxiibbada qaaliga ah, sidaan soo sheegnay, inta aan baranayno erey Jarmal ah iyo barashada erey cusub oo Jarmal ah, waa inaan si hubaal ah u baranno ereygaas iyo maqaalkiisa.
Intaad erey baraneyso Muxuu yahay qodobkan Waa inaan isweydiino oo fiirino. Waa inaan koox koox u dhignaa eray kasta oo aan ku baran doonno mid cusub sida ku xusan maqaalkiisa oo aan ugu qori karno maskaxdeena sidaas.
Saaxiibbada qaaliga ah, ereyada hortooda waxaan ku isticmaali doonnaa jumladda qodobbada qaarkood la loo yaqaan, waxa aan uga jeedno si fudud ayaa loo fahmay, horay loo sheegay walxaha waa la sharaxay. Tusaale ahaan, "waxaan cunay tufaaxWaxaa la fahansan yahay in tufaaxa ku xusan jumlada uu yahay tufaax horey loo yaqaanay. Sidaas darteed “waxaan cunay tufaaxIyadoo "xukun"waxaan cunay tufaaxaas”Xukunka ayaa isku macno ah. Jumladan, waxa loola jeedaa weedhan waa "ElmaWaxay ka dhigan tahay in tufaax la yaqaan loo fahmay inuu yahay tufaax hore loo soo sheegay, dhexda.
Maqaallo qaarkood oo Jarmal ah der - das - dhinto Waxaan siinay macluumaad ku saabsan qodobbada.
Hadda aan siino xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan qodobbada aan dhammaadka lahayn ee Jarmal.
Jarmal der - das -die ka sokow qodobbada qaarkood, sidoo kale ein iyo eine Waxaa jira laba qodob oo aan la cayimin, kuwaas oo kala ah.
Erayada Ein iyo eine macnaheedu waa "mid" ama "mid uun." Waxaa loo turjumi karaa sidan.
Marka, ereyadee ayaa loo isticmaalaa qodobbada ein iyo eine, iyo ereyo noocee ah ayaa ka horreeya maqaallada ein iyo eine?
Dhammaan ereyada labka iyo dheddig-laboodka ah maqaalku hortiisa ayuu ku hor yaal.
Dhammaan ereyada haweenka waxay leeyihiin maqaalka eine hortooda.
Ama waxaan ku dhihi karnaa qaab kale. Sidaan kor kusoo xusnayba, qodobka gaarka ah ee ereyada galmada labka ah wuxuu ahaa maqaalka "der". Qodobka qeexan ee ereyada aan jinsiga lahayn wuxuu ahaa maqaalka "das". Qodobka ereyada dheddig-laboodka wuxuu ahaa maqaal "dhinta".
Qodobka aan la cayimin ee ereyada leh maqaal qeexan der ama das waa ein maqaal.
Haddii ereyada leh dhimashadu ay leedahay maqaal aan xad lahayn, eine waa qodobka.
Hadda waxaad ku odhan doontaa ereyada Jarmalka hortooda maqaal gaar ah waxay noqon doontaa maqaal aan xad lahayn ma noqon doontaa Erayada hortooda der - das - dhinto Ma maqaalada mid baa laga helaa mise ein - eine Mid ka mid ah qodobbada ma la heli doonaa?
Aan ka jawaabno su'aashan hadda. Qodobka ugu muhiimsan waa qodobka gaarka ah.sidaas der -das -die maqaallada. Markaad eray baraneyso, waa kugu filan tahay inaad ogaato inuu ereygaasi yahay maqaal, das ama dhinto. Way cadahay qodobka gaarka ah ein iyo eine, oo horeyba u ahaa maqaallo aan la cayimin, ayaa loo adeegsadaa halkii. Sidii aan horay u soo sheegnay, Hadduu yiraahdo maqaal cayiman oo erey Jarmal ah, qodobka aan la cayimin ee eraygaasi waa ein.. Haddii qodobka gaarka ah ee eray Jarmal ahi yahay das, qodobka aan dhammaadka lahayn ee eraygaas sidoo kale waa ein., Haddii qodobka saxda ah ee eray Jarmal ahi uu yahay maqaal dhinto, qodobka aan la cayimin ee eraygaasi waa eine maqaal.
Haddii erayga lagu isticmaalay jumladda, magaca la isticmaalay, shayga, shayga ama wax kasta oo uu yahay, haddii ay sidoo kale garanayaan qofka ama dadka lala hadlay, haddii hore loo soo sheegay, haddii shaygaas la arkay ama macluumaad la leeyahay ayaa la helay, marka la soo koobo, shay la yaqaan Kadibna waxaa jira maqaal qeexan oo ereyga hortiisa ah oo loogu adeegsan doono jumladda, oo ah - das - die
Sikastaba, magaca, shayga, sheyga, erayga lagu adeegsan karo jumlada waa, hadii uusan aheyn shay horey looyaqiin, haduu shey yahay, haduu yahay shey aan xad laheyn, markaa qodobka aan dhamaadka laheyn, ie ein - eine , waxaa loo adeegsaday eraygan hortiisa.
Tusaale ahaan, aan qorno laba jumladood oo kala duwan adoo adeegsanaya isla shayga hoose:
Waxaan iibsaday gaari
Gaarigaas wuu helay
Aynu eegno jumladda koowaad, “waxaan iibsaday gaari"ayaa yidhi. Haddaad qof u sheegto inaan baabuur iibsaday, maxay odhan lahaayeen? Oooo nasiib wacan, maxaad soo iibsatay, calaamadee, mid cusub ama gacan labaad, imisa lacag ayey leeyihiin oo su'aalo sidan oo kale ah ayey weydiiyaan.? Marka, sida laga fahmi karo jumlada hore, horta erayga baabuur weedha hore maqaal aan la cayimin sida ein ama eine Qodobka ku habboon ayaa loo isticmaali doonaa. Marka keebaa la isticmaali doonaa? Jarmal ereyga gaariga Das Auto waa ereyga. Maqaalka waa das maqaal. Marka halkii das maqaal gaar ah ein maqaal aan xadidnayn Waxaa loo isticmaali doonaa.
Aynu eegno jumladda labaad. Gaarigaas wuu helay Ayuu yidhi. Gaarigaas sidaad sheegtay horaa loo sheegay gaari. Waxay umuuqataa gaari la waday, la arkay ama laga hadlay. Haddii gaariga weedhan labaad yahay baabuur la yaqaan, markaa weedh sidan oo kale ah maqaal qeexan oo ah dheh - das - dhinta Mid ka mid ah qodobbada ayaa la isticmaali doonaa. Jumladan maxaa yeelay ereyga Jarmalka ee baabuurka waa das Auto Das Auto Ereyga ayaa la isticmaali doonaa.
Tani waa farqiga u dhexeeya qodobbada qaarkood iyo qodobbada aan la cayimin.
das Auto: baabuur
ein Auto: baabuur
ein Buch: buug
der Tisch: miiska
ein Tisch: miis
Soo Koobid Mawduucyada Jarmalka
Saaxiibbada qaaliga ah, waxaan bixinnay macluumaad ku saabsan maqaallada Jarmalka, maqaallada Jarmalka, maqaallo aan la cayimin, Jarmalka Jarmal Intaas ayaynu ku taaban doonnaa mowduuca. Mawduuca maqaallada Jarmalku waa mid ka mid ah maaddooyinka runtii u baahan in si taxaddar leh loo barto. Tani waa sababta muxaadarooyinka maqaallada Jarmalka loogu sameeyo si faahfaahsan.
Jarmalka Jarmal Waxaan isku daynay inaan sharaxaad dheer ka bixino maxaa yeelay waa mowduuc aad muhiim u ah.
Waxaa jira laba nooc oo kooxo jilicsan oo Jarmal ah.
der Jarmal, dhiman iyo article das waxaa ku tilmaamey article la hubo.
Waxa kale oo jira maqaallo aan xadidnayn, ein iyo eine. Waxaa jira sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan labada maqaal ee ku yaal boggayaga Si loo barto maqaallada Jarmalka, labadaba maqaallo gaar ah iyo maqaallo aan xadidnayn ayaa u baahan in si fiican loo barto.Haddaba aan siino mawduucyadeenna isku xirnaanta maqaallo gaar ah iyo maqaallo aan xad lahayn.
Qeexida Mawduuca Gaarka ah ee Jarmalka
Jarmal aan la hubin Artikeller Mawduuca Mawduuca
Waxaa jira farriinta 3 ee Jarmalka: der, das, u dhintaan
Hadda waxaan haysanaa daqiiqado yar si aan u luminay imtixaankeenna mawduuca Jarmalka.
Saaxiibbada qaaliga ah boggeena, oo ah bogga ugu weyn uguna caansan Turkiga ee ku hadla luqadda Jarmalka ayaa ku jira maqaal Jarmal ah oo laga qoray daraasiin koorsooyin la heli karo. Adoo raadinaya qaybta baaritaanka ee boggayaga ama Jarmalka Jarmal waxaad gaari kartaa dhammaan koorasyadii aan ka sameynay artikel jarmalka adigoo gujinaya mawduuca mawduuca.
Waad ku qori kartaa wixii su'aalo iyo faallooyin ah ee ku saabsan casharradeenna Jarmal ee ku saabsan barxadaha almancax ama qaybta faallooyinka ee hoose. Dhamaan su'aalahaaga waxaa ka doodi kara xubnaha almancax.
Haddii aadan garanaynin amarkaa waxaad raaci doontaa casharrada Jarmalka, Mawduuca JarmalkaWaad baari kartaa kuwayaga. Sida ku xusan amarkan, waxaad ula socon kartaa casharradeena Jarmalka talaabo talaabo.
Tags: 10. fasalka nasiibka mawduuca, 9. fasalka nasiibka mawduuca, germany artikel, german artikel, almancada artikel, artikel german, waa maxay artikel, casharka farshaxanka